China FOTON BJ6802 / BJ6902 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
8-9M usoro kooshi
Foton BJ6802 / BJ6902 usoro nchịkwa bụ kwalite nke Foton ụgbọ ala tozuru oke ngwaahịa. Ọ kwụsiri ike, dị mma, dị ike, na-arụ ọrụ nke ọma na nchekwa ike. Ọ na-enye ihe ngwọta dị mma, nke siri ike, nchekwa, gburugburu ebe obibi na nke kwesịrị ekwesị maka njem njem niile.
N'ozuzu Dimension 8995 * 2450 * 3300
Curb arọ 9.1T
Ikike Oche 35 + 1
Foton BJ6802 / BJ6902 usoro nchịkwa bụ kwalite nke Foton ụgbọ ala tozuru oke ngwaahịa. Ọ kwụsiri ike, dị mma, dị ike, na-arụ ọrụ nke ọma na nchekwa ike. Ọ na-egosipụta ọdịdị ejiji na ọmarịcha, okomoko ime ụlọ, na-enye ndị njem ahụ nchebe na njem na-enye obi ụtọ.
BJ6802 / BJ6902 masịrị ya nke ukwuu nke na-arụ ọrụ nke ọma na draịva na-arụ ọrụ nke ọma. Mụbara engine arụmọrụ na obere oriri; ụzọ tozuru etozu site n'ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ.